Safiirka Soomaaliya ee Dalka Kenya oo Baaq u Diray Ganacsatada Soomaalida ee Suuqa Islii (VIDEO) - Hablaha Media Network
Safiirka Soomaaliya ee Dalka Kenya oo Baaq u Diray Ganacsatada Soomaalida ee Suuqa Islii (VIDEO)
HMN:- Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay inay sharciga ilaaliyaan, Xilli maalmihii la soo dhaafay Suuqa Ganacsiga ee Magaalada Nairobi uu ka taagnaa Rabshado u dhaxeeyay Ganacsatada yar yar ee loo yaqaan Waratada iyo Ganacsatada Soomaalida ah ee Dukaamaha waaweyn ku leh magaaladaasi.
Jamaal Maxamed Xasan, Safiirka Somaliya u fadhiya dalka Kenya, ayaa wuxuu sheegay dadka ganacsatada ah ee Xaafadda Islii ku dukaameysta in looga baahan yahay inay si nabadgelyo ah halkaasi uga shaqeystaan.
Waxa uu sheegay hadii dadka Soomaalida ah aysan ka shaqeyn nidaamka iyo suggida ammaanka iyo ku noolaanshaha Nabadgelyada inaysan suuragaleyn in ciidamada Booliska Kenya ay gutaan howshooda.
Ciidamada Booliska Xaafada Islii ee ay Soomaalidu ka degto magaalada Nairobi ayaa kala eryay waratadii, waxayna halkaasi ku xaliyeen buuqii ka taagnaa Suuqa Ganacsiga Islii, waxaana dadka ganacsatada waratada ah lagu amray inay ka guuraan goobaha ay ku ganacsadaan.
Ganacsatada Dukaamada leh ayaa ku eedeeynaya ganacsatada yar yar ee waratada ah inay keeneen saxmad badan iyo Suuq xiran, iyadoo dukaamada waaweyn aysan u suurto galin in shacad uu u soo galo dukaamdooda.
Soomaali badan ayaa waxa ay goobo ganacsi oo waaweyn ku leeyihiin Xaafada Islii ee Magaalada Nairobi oo ah halka ay degan yihiin inta badan dadka ganacstada Soomaalida ah.